Desktop Computer မှာပါရှိတဲ့ Power Supply အကြောင်း သိကောင်းစရာ - Myanmar End User
By Myanmar End User December 13, 2017 2758 views
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ power supply က အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မားသားဘုတ်နဲ့ အခြားသော peripheral device တွေကို power ပေးရလို့ပါပဲ။ အဝင် AC ကနေ အထွက် DC ကို ပြောင်းလဲပေးပြီး power တွေကို distribute လုပ်ပေးရတဲ့ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရပါတယ်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဒီလို power supply တစ်လုံးကွန်ပျူတာမှာ မကောင်းဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
– Power supply ပျက်နိုင်သည့် အကြောင်းတရားများ
5. Electrical surge
6. Default industry
1. FAN – power supply မှာ fan ပါရှိပါတယ်။ ဒီ fan လည်မှု မလည်မှုပေါ် မူတည်ပြီးတော့ troubleshoot လုပ်တဲ့ နေရာမှာ သုံးသပ်ပြီး လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။ အချို့ power supply တွေဆို fan ကလည်လို့ လည်မှန်းတောင်မသိဘူး အရမ်းညင်သာတယ်၊ ဆူညံမှု နည်းလေကောင်းလေပေါ့။ မနက် နှစ်နာရီ သုံးနာရီဆို တော်တော်သိသာတယ် စက်ရှေ့မှာ ထိုင်ဖူးရင်ပေါ့။ ဒီ power supply မှာပါတဲ့ fan က တစ်မိနစ်မှာ အပတ်ရေ ဘယ်လောက်နဲ့ လည်ပတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ တိုင်းတာပါတယ်။ Revolution per minute RPM နဲ့တိုင်းပါတယ်။ FAN လည်နှုန်းကျသွားရင် power supply က heat တွေ အရမ်းတက်လာပြီး ပူလာမယ်။ နောက်ဆုံး မခံနိုင်တော့ပဲ လောင်သွားမယ်။ ဒါကြောင့် Power supply fan ပုံမှန်လည်ပတ်မှုမရှိပဲ နှေးသွားရင် (သို့) ပျက်စီးသွားရင် power supply ပျက်နိုင်ပါတယ်။
2. Components – power supply ထဲမှာ circuit board ပါရှိပါတယ်။ အဲဒီ circuit board မှာပါတဲ့ components တွေရဲ့ ချို့ယွင်းမှု ဒါမှမဟုတ် အပူကြောင့် capacitor များ လောင်ကျွမ်းခြင်း၊ converter circuit လောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့် Power supply ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။
3. Cord – ကြိုးကတော့ ပျက်ခဲလှပါတယ်။ သူကပေါက်ပြဲ ပျက်စီးရင်လည်း leakage ဖြစ်တာကြောင့် တစ်ကြောင်း ပေါက်ပြဲပျက်စီးတဲ့နေရာနဲ့ motherboard ပေါ်က component တစ်ခုခု (သို့) casing နဲ့သွားထိပြီး short ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပေါက်ပြဲတဲ့နေရာကို တိပ်နဲ့ပတ်ထားလို့တော့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အထွက်ဗို့ကို တိုင်းကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
4. Connector – power supply အထွက်မှာ DC ကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့ motherboard ကိုပေးတဲ့ ပါဝါ connector, hard disk, CD Rom ကိုပေးတဲ့ Power connector တွေပါရှိတယ်။ ဒီ power connector တွေက မကောင်းရင် (များသောအားဖြင့် အထွက် ဗို့အား မမှန်ရင်ပေါ့လေ ) တခြား ပစ္စည်းတွေကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် connector ကောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ အထွက် ဗို့အား မှန်ဖို့လိုပါတယ်။ အထွက် ဗို့အား မမှန်လို့ hard disk သုံး၊ လေးလုံးလောက် ပျက်ခဲ့ဖူးတာလဲ ရှိခဲ့ဖူးတော့ connnector တွေ အထွက် ဗို့အား မမှန်ရင်လည်း power connector ကိုဖြုတ်လဲလို့ အဆင်မပြေဘူးလေ။ တစ်ခုမကောင်းရင် တခြားခေါင်းတွေနဲ့ ပြောင်းသုံး ဒါပဲရှိပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ခေါင်းကနေမှ ပြန်ပွားထုတ်ပြီး သုံးရုံပဲရှိတာပဲ။ Hard disk, CD Rom တို့ကို power ပေးတဲ့ connector က လေးခုလောက် အနည်းဆုံးပါတယ်၊ motherboard connecotor ကတော့ အပိုမပါဘူး၊ motherboard connector မကောင်းလို့ကတော့ အသစ်လဲရဖို့ များတယ်။
5. Electric surge – မီးအား ရုတ်တရက် မြင့်တက်လိုက်၊ ကျသွားလိုက် ဖြစ်မှုကြောင့် power supply က power load မခံနိုင်တော့ပဲ power supply ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။
6. Default industry – စက်ရုံကနေပြီးတော့ ရာနဲ့ ထောင်နဲ့ ချီတဲ့ Power supply ကို ထုတ်လိုက်တာဆိုတော့ အပျက်အစီး အနည်းငယ်တော့ ရှိကြမှာပါပဲ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လဲ ကြုံဖူးတယ်၊ ဘယ်လောက်မှ မကြာသေးဘူး၊ ဝယ်ပြီး တစ်ပတ်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ စက်က သူ့အလိုလို ထိုးရပ်သွားတယ်။ တခြား Power supply အစားထိုးကြည့်တော့ အကောင်းပကတိအတိုင်း အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်လို့ Power supply ပျက်တာ သေချာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြန်လဲလိုက်ရပါတယ်။
– Power supply ပျက်ပြီဆိုလျှင် သိနိုင်သည့် အချက်များ
3. Noise and Smell
4. Startup Failure
5. Unexpected shut down
6. Quick shut down
Crashes – power supply ပျက်လျင် မမျှော်လင့်ပဲ ရုတ်တစ်ရက် ပါဝါ လုံးဝမလာတော့ခြင်း (သို့) Restart ခဏခဏ ကျနေခြင်း၊ processor နဲ့ RAM တို့ရဲ့ Heat က သာမှန်ထက် ပို၍ပူလာခြင်းဟာ power supply ကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ လက္ခဏာ တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကွန်ပျူတာမှာ power supply failure error message တွေ အမျိုးမျိုးပြနေတတ်ပါတယ်။
Heat – power supply ပျက်ပြီဆိုရင် အရမ်းပူလာပြီး လက်နဲ့ထိရင်တောင် အရေပြားလောင်တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အတွင်းက fan က လည်နှုန်းတအား နှေးသွားလို့ အပူတွေ အရမ်းထွက်လာတာ ဖြစ်တယ်။ ထိုအတူပဲ CPU နဲ့ RAM တွေရဲ့ temperature တွေလည်း မြင့်တက်လာစေနိုင်တယ်။
Noise and Smell – Power supply က ဝယ်တုန်းကတော့အကောင်း fan လည်သံလေးက ညင်ညင်သာသာလေး ယခုတော့ ဆူဆူညံဖြစ်နေမယ်။ နောက်မီးခိုးနံ့ လိုလို ငြော်နံ့ လိုလို ရနေမယ်ဆိုရင် power supply ပျက်ဖို့ရာ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Fan လည်တဲ့ အသံက မနည်းရုန်းနေရတဲ့ အသံ (သို့) တအားဆူနေသလား နားထောင်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ Power supply အနားကပ်ကြည့်လို့ ငြော်နံ့ မီးခိုးနံ့ ရနေရင် power supply လဲရဖို့များနေပြီ။
Startup Failure – ကွန်ပျူတာ Power စဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာကိုက ဘာမှကို မလာတော့တာ power supply fan လည်တဲ့ အသံလည်း မကြားရသလို power လုံးဝကို မထွက်တော့တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် motherboard နဲ့ တစ်ခြား peripheral device တွေကို power မရောက်တော့ပါဘူး။ Motherboard ဟာ power မရတော့တဲ့အတွက် power supply ပျက်တဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။
Unexpected shut down – မမျှော်လင့်ပဲ သုံးနေတုန်း shut down ဖြစ်ဖြစ်သွားခြင်းဟာ power supply ပျက်စီးတဲ့ လက္ခဏာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Quick shut down – power တော့ on လို့ရပါရဲ့ POST လုပ်ငန်းစဉ် လုပ်နေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ shut down ဖြစ်ပြီး power freeze ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲ power supply မကောင်းတော့တဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Power အလုံအလောက်မရတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
– Power supply ပျက်ပြီဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲ
အသစ်လဲရုံပဲပေါ့။ ကိုယ်တိုင် power supply ပြင်တဲ့သူ မဟုတ်ရင်ပေါ့၊ သာမန် user တွေအနေနဲ့ power supply ကို ဖွင့်ပြီး ပြင်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့လို့ ပြောရမှာပဲ။ အထဲက circuit ဘုတ်မှာ condenser(capacitor) တွေပါရှိတယ်။ ဒီ capacitor တွေက power ရရှိစဉ်တုန်းက charge တွေကို သိုလှောင်ထားတဲ့ high voltage တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူကအန္တရယ်များပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ကျွမ်းကျင်သူသာ ကိုင်သင့်၊ ပြင်သင့်ပါတယ်။ Power supply ဝယ်မယ်ဆိုရင် watts များလေ ပိုကောင်းလေပါပဲ။
အထက်က အကြောင်းအရာတွေက power supply ကိုပဲ ဦးတည်ပြီး ဆွေးနွေးတာဖြစ်လို့ ဘယ်အပိုင်းက ဖြစ်တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ရအောင် ဆွေးနွေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာတွေ ခေါင်းထဲမှာရှိနေရင် စဉ်းစားရလွယ်ပါတယ်။
Source >> https://www.facebook.com/ipconmdy/posts/454120194925848:0
ကှနျပြူတာတဈလုံးမှာ power supply က အရေးကွီးတဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။ မားသားဘုတျနဲ့ အခွားသော peripheral device တှကေို power ပေးရလို့ပါပဲ။ အဝငျ AC ကနေ အထှကျ DC ကို ပွောငျးလဲပေးပွီး power တှကေို distribute လုပျပေးရတဲ့ တာဝနျကို ထမျးဆောငျရပါတယျ။ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ ဒီလို power supply တဈလုံးကှနျပြူတာမှာ မကောငျးဘူးဆိုရငျ ဘယျလိုတှဖွေဈလာမလဲဆိုတာ လေ့လာကွညျ့နိုငျပါတယျ။
– Power supply ပကြျနိုငျသညျ့ အကွောငျးတရားမြား
1. FAN – power supply မှာ fan ပါရှိပါတယျ။ ဒီ fan လညျမှု မလညျမှုပေါျ မူတညျပွီးတော့ troubleshoot လုပျတဲ့ နရောမှာ သုံးသပျပွီး လုပျဆောငျလို့ ရပါတယျ။ အခြို့ power supply တှဆေို fan ကလညျလို့ လညျမှနျးတောငျမသိဘူး အရမျးညငျသာတယျ၊ ဆူညံမှု နညျးလကေောငျးလပေေါ့။ မနကျ နှဈနာရီ သုံးနာရီဆို တောျတောျသိသာတယျ စကျရှေ့မှာ ထိုငျဖူးရငျပေါ့။ ဒီ power supply မှာပါတဲ့ fan က တဈမိနဈမှာ အပတျရေ ဘယျလောကျနဲ့ လညျပတျတယျဆိုပွီးတော့ တိုငျးတာပါတယျ။ Revolution per minute RPM နဲ့တိုငျးပါတယျ။ FAN လညျနှုနျးကသြှားရငျ power supply က heat တှေ အရမျးတကျလာပွီး ပူလာမယျ။ နောကျဆုံး မခံနိုငျတော့ပဲ လောငျသှားမယျ။ ဒါကွောငျ့ Power supply fan ပုံမှနျလညျပတျမှုမရှိပဲ နှေးသှားရငျ (သို့) ပကြျစီးသှားရငျ power supply ပကြျနိုငျပါတယျ။
2. Components – power supply ထဲမှာ circuit board ပါရှိပါတယျ။ အဲဒီ circuit board မှာပါတဲ့ components တှရေဲ့ ခြို့ယှငျးမှု ဒါမှမဟုတျ အပူကွောငျ့ capacitor မြား လောငျကြှမျးခွငျး၊ converter circuit လောငျကြှမျးခွငျးကွောငျ့ Power supply ပကြျစီးနိုငျပါတယျ။
3. Cord – ကွိုးကတော့ ပကြျခဲလှပါတယျ။ သူကပေါကျပွဲ ပကြျစီးရငျလညျး leakage ဖွဈတာကွောငျ့ တဈကွောငျး ပေါကျပွဲပကြျစီးတဲ့နရောနဲ့ motherboard ပေါျက component တဈခုခု (သို့) casing နဲ့သှားထိပွီး short ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ပေါကျပွဲတဲ့နရောကို တိပျနဲ့ပတျထားလို့တော့ ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အထှကျဗို့ကို တိုငျးကွညျ့ရမှာ ဖွဈပါတယျ။
4. Connector – power supply အထှကျမှာ DC ကိုပွောငျးလဲပေးတဲ့ motherboard ကိုပေးတဲ့ ပါဝါ connector, hard disk, CD Rom ကိုပေးတဲ့ Power connector တှပေါရှိတယျ။ ဒီ power connector တှကေ မကောငျးရငျ (မြားသောအားဖွငျ့ အထှကျ ဗို့အား မမှနျရငျပေါ့လေ ) တခွား ပစ်စညျးတှကေို ထိခိုကျနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ connector ကောငျးဖို့ လိုပါတယျ။ အထှကျ ဗို့အား မှနျဖို့လိုပါတယျ။ အထှကျ ဗို့အား မမှနျလို့ hard disk သုံး၊ လေးလုံးလောကျ ပကြျခဲ့ဖူးတာလဲ ရှိခဲ့ဖူးတော့ connnector တှေ အထှကျ ဗို့အား မမှနျရငျလညျး power connector ကိုဖွုတျလဲလို့ အဆငျမပွဘေူးလေ။ တဈခုမကောငျးရငျ တခွားခေါငျးတှနေဲ့ ပွောငျးသုံး ဒါပဲရှိပါတယျ။ ကောငျးတဲ့ခေါငျးကနမှေ ပွနျပှားထုတျပွီး သုံးရုံပဲရှိတာပဲ။ Hard disk, CD Rom တို့ကို power ပေးတဲ့ connector က လေးခုလောကျ အနညျးဆုံးပါတယျ၊ motherboard connecotor ကတော့ အပိုမပါဘူး၊ motherboard connector မကောငျးလို့ကတော့ အသဈလဲရဖို့ မြားတယျ။
5. Electric surge – မီးအား ရုတျတရကျ မွငျ့တကျလိုကျ၊ ကသြှားလိုကျ ဖွဈမှုကွောငျ့ power supply က power load မခံနိုငျတော့ပဲ power supply ပကြျစီးနိုငျပါတယျ။
6. Default industry – စကျရုံကနပွေီးတော့ ရာနဲ့ ထောငျနဲ့ ခြီတဲ့ Power supply ကို ထုတျလိုကျတာဆိုတော့ အပကြျအစီး အနညျးငယျတော့ ရှိကွမှာပါပဲ။ သူငယျခငြျးတဈယောကျလဲ ကွုံဖူးတယျ၊ ဘယျလောကျမှ မကွာသေးဘူး၊ ဝယျပွီး တဈပတျလောကျပဲ ရှိသေးတယျ။ စကျက သူ့အလိုလို ထိုးရပျသှားတယျ။ တခွား Power supply အစားထိုးကွညျ့တော့ အကောငျးပကတိအတိုငျး အလုပျလုပျနတောဖွဈလို့ Power supply ပကြျတာ သခြောတာဖွဈတဲ့အတှကျ ပွနျလဲလိုကျရပါတယျ။
– Power supply ပကြျပွီဆိုလြှငျ သိနိုငျသညျ့ အခကြျမြား
Crashes – power supply ပကြျလငြျ မမြှောျလငျ့ပဲ ရုတျတဈရကျ ပါဝါ လုံးဝမလာတော့ခွငျး (သို့) Restart ခဏခဏ ကနြခွေငျး၊ processor နဲ့ RAM တို့ရဲ့ Heat က သာမှနျထကျ ပို၍ပူလာခွငျးဟာ power supply ကိုပကြျစီးစနေိုငျတဲ့ လက်ခဏာ တှပေဲဖွဈပါတယျ။ နောကျကှနျပြူတာမှာ power supply failure error message တှေ အမြိုးမြိုးပွနတေတျပါတယျ။
Heat – power supply ပကြျပွီဆိုရငျ အရမျးပူလာပွီး လကျနဲ့ထိရငျတောငျ အရပွေားလောငျတဲ့အထိ ဖွဈနိုငျတယျ။ အတှငျးက fan က လညျနှုနျးတအား နှေးသှားလို့ အပူတှေ အရမျးထှကျလာတာ ဖွဈတယျ။ ထိုအတူပဲ CPU နဲ့ RAM တှရေဲ့ temperature တှလေညျး မွငျ့တကျလာစနေိုငျတယျ။
Noise and Smell – Power supply က ဝယျတုနျးကတော့အကောငျး fan လညျသံလေးက ညငျညငျသာသာလေး ယခုတော့ ဆူဆူညံဖွဈနမေယျ။ နောကျမီးခိုးနံ့ လိုလို ငွောျနံ့ လိုလို ရနမေယျဆိုရငျ power supply ပကြျဖို့ရာ လက်ခဏာတှေ ဖွဈပါတယျ။ Fan လညျတဲ့ အသံက မနညျးရုနျးနရေတဲ့ အသံ (သို့) တအားဆူနသေလား နားထောငျကွညျ့ရငျ သိနိုငျပါတယျ။ Power supply အနားကပျကွညျ့လို့ ငွောျနံ့ မီးခိုးနံ့ ရနရေငျ power supply လဲရဖို့မြားနပွေီ။
Startup Failure – ကှနျပြူတာ Power စဖှငျ့ဖှငျ့ခငြျးမှာကိုက ဘာမှကို မလာတော့တာ power supply fan လညျတဲ့ အသံလညျး မကွားရသလို power လုံးဝကို မထှကျတော့တာမြိုး ဖွဈပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ motherboard နဲ့ တဈခွား peripheral device တှကေို power မရောကျတော့ပါဘူး။ Motherboard ဟာ power မရတော့တဲ့အတှကျ power supply ပကြျတဲ့ လက်ခဏာပါပဲ။
Unexpected shut down – မမြှောျလငျ့ပဲ သုံးနတေုနျး shut down ဖွဈဖွဈသှားခွငျးဟာ power supply ပကြျစီးတဲ့ လက်ခဏာ တဈခုဖွဈပါတယျ။
Quick shut down – power တော့ on လို့ရပါရဲ့ POST လုပျငနျးစဉျ လုပျနတေုနျးပဲ ရှိသေးတယျ။ မွနျမွနျဆနျဆနျပဲ shut down ဖွဈပွီး power freeze ဖွဈသှားတယျဆိုရငျလညျးပဲ power supply မကောငျးတော့တဲ့ လက်ခဏာ ဖွဈပါတယျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ Power အလုံအလောကျမရတာလဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
– Power supply ပကြျပွီဆိုရငျ ဘာလုပျမလဲ
အသဈလဲရုံပဲပေါ့။ ကိုယျတိုငျ power supply ပွငျတဲ့သူ မဟုတျရငျပေါ့၊ သာမနျ user တှအေနနေဲ့ power supply ကို ဖှငျ့ပွီး ပွငျဖို့ မကွိုးစားပါနဲ့လို့ ပွောရမှာပဲ။ အထဲက circuit ဘုတျမှာ condenser(capacitor) တှပေါရှိတယျ။ ဒီ capacitor တှကေ power ရရှိစဉျတုနျးက charge တှကေို သိုလှောငျထားတဲ့ high voltage တှဖွေဈပါတယျ။ သူကအန်တရယျမြားပါတယျ၊ ဒါကွောငျ့ ကြှမျးကငြျသူသာ ကိုငျသငျ့၊ ပွငျသငျ့ပါတယျ။ Power supply ဝယျမယျဆိုရငျ watts မြားလေ ပိုကောငျးလပေါပဲ။
အထကျက အကွောငျးအရာတှကေ power supply ကိုပဲ ဦးတညျပွီး ဆှေးနှေးတာဖွဈလို့ ဘယျအပိုငျးက ဖွဈတယျဆိုတာ စဉျးစားလို့ရအောငျ ဆှေးနှေးလိုကျရခွငျး ဖွဈပါတယျ။ အကွောငျးအရာတှေ ခေါငျးထဲမှာရှိနရေငျ စဉျးစားရလှယျပါတယျ။
HP Laptop တွေက မယုံရတော့ဘူးလား???
October 11, 2017 157623 views
October 12, 2017 120275 views
February 24, 2017 72704 views
November 16, 2016 49642 views